Version 0.4.1 – Ọsọ ọsọ gị ahịa
January 13, 2010 site na rịọ 2 Comments
Ọrụ e mere na optimizing ahụ. Css faịlụ, na a gụnyere ya ná ndị ọnụ ọgụgụ inclusions ka n'okpuru nkịtị wijetị were ga na-abụ otu faịlụ ji.
Ma ọ bụrụ na ihe ọ bụla etịbede gị, ọ bụla na ihe nchọgharị ma ọ bụ isiokwu. Dị nnọọ ka anyị mara.
O bu ihe nwute, a tọhapụ ga na-agụnye nkwado nke jQuery 1.4 dị ka e nwere ebe ke jQuery UI taabụ nke na-egbochi ndị kwalite n'ebe a, Anyị ga-ma eleghị anya nweta nkwalite otu ugboro ọzọ version nke jQuery UI na-aga na-ebi ndụ.
Gbara akwụkwọ N'okpuru: Hapụ ọkwa Akpado Na: obere, tọhapụ, ọsọ nkwalite, WordPress ngwa mgbakwunye
January 18, 2010 na 12:34 obi
Ich habe Version 0.4.1 und XML Sitemap Generator für WordPress 3.2.2 arụnyere.
January 18, 2010 na 1:20 obi